VaBiden Votura Mashoko kuNyika yeAmerica Vachiti Vazadzikisa Zvavakavimbisa Kuita Mumazuva Zana eKutanga
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaJoe Biden
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica pamberi pematare maviri eHouse of Representatives neSenate mudare reCapital Hill muWashington DC.
Izvi zvauya mushure mekunge VaBiden vasvika mazuva zana vari muhofisi kubva zvavatora mhiko yekutungamira nyika.
VaBiden sezvange zvakatarisirwa vataura nezvechirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose kusanganisira zviuru mazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 547 000 muAmerica uye kubata vanhu mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 million.
Asi vati vari kubudirira kurwisa chirwere ichi sezvavakavimbisa musarudzo.
Vati vachapa dzimwe nyika nhomba kana vanhu vose vemuAmerica vabayiwa nhomba. Panyaya yezvehupfumi, VaBiden vati hurumende yavo yakwanisa kuti zvinhu zvigadzikane.
Vanhu vakawanda zvikuru vakawana mabasa muAmerica uye IMF inoti hupfumi hweAmerica huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana.
VaBiden vanoti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mari uye madzimai apihwewo mari yakawanda. Vanoti vakazvipira kushanda nemaRepublicans pagwara ravo rekuvandudza zvehupfumi.
VaBiden vataurawo nezvekuda kwavo kuwandudza zviwakwa vachiti zvichabatsira kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Vati vanoda kuti shoroma dzibhadharewo mutero wakati kurei kuti vakwanise kugadzira zvivakwa izvi.
MuAmerica hamuna kugadzikana mune mamwe matunhu zvichitevera kuurayiwa kwevamwe vatema nemapurisa zvikuru vechichena. VaBiden vati nyaya iyi inoda kugadziriswa.
VaBiden vakurudzirawo kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nekutengeswa kwepfuti zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vakawanda nevamwe vanhu vanokwanisa kutenga pfuti asi vasina kugadzikana mupfungwa.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Kamala Harris mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi uye Amai Nancy Pelosi mudzimai wekutanga kuva mutauriri wedare reHouse of Representative vange vakagara pazvigaro zvepamusoro pedyo naVaBiden.
Papedza VaBiden kutaura, Senator Tim Scott vekuSouth Carolina vabva vataurawo vakamirira bato rinopikisa remaRebuplicans. Senator Scott ndivo chete munhu mutema anova Senator mubato remaRepublicans.
VaScott vati maDemocrats haasi kuratidza kuda kushanda nebato ravo panyaya dzakaita sekurwisa chirwere cheCovid-19 kuti vana vadzokere kuchikoro kana pakuvandudza hupfumi. Vati kazhinji maDemocrats anoita zano ndega.